Ogaden News Agency (ONA) – Jaaliyadda Sucudi arabia faracyada Jeddah, Makah iyo Riyadh oo shirar wadatashi ah isugu yimid
Jaaliyadda Sucudi arabia faracyada Jeddah, Makah iyo Riyadh oo shirar wadatashi ah isugu yimid
Jaaliyadaha kor ku xusan oo shirar wadatashi ah isugu yimid ayuu wakiilka JWXO ee Bariga dhexe uga xogwaramay arimaha halganka ku soo cusboonaaday iyo socdaalkii uu ku sii maray Bariga Africa oo uu dhawaan ka soo galay.
Shirkii ugu horeeyay wuxuu ka dhacay magaaladda Jeddah 14kii bisha iyadoo shirkii 2aadna uu ka dhacay magaalada barakaysan ee Makah 17kii bisha.
Shirarkan oo u dhacay si heersare ah ayuu wakiilku ka warbixiyay marxaladihii uu soo marayo halganka iyo heerka uu maanta taagan yahay isagoo ku tilmaamay in halganka JWXO ay hogaaminayso uu maanta gaaray dunida dacaladeeda isla markaana uu gumaysiga Itobiya ka quustay inuu ku maquuniyo CWXO hab ciidan. Wuxuu wakiilku u sheegay jaaliyadda in socdaalkii uu ku tagay Bariga Africa kula kulmay dadweyne aad u habaysan oo aad u taageersan halganka shacabka Ogadenya iyo jabhadda, wuxuuna ku tilmaamay in dadweynihii uu kula kulmay halkaa oo qaarkood ay waqti dhow ka yimaadeen gudihii dalka ay xog fiican oo lagu diirsado ka siiyeen xaaladda uu halganka marayo iyo mooraalka shacabka oo aad u sareeya inkastoo cadawga uu xasuuq ba’an u gaystay shacabka gaar ahaan bilihii la soo dhaafay.
Shirk ii sadexaad ee jaaliyadda oo ka dhacay magaalo madaxda Riyaadh ayaa waxaa soo agaasimay faraca Riyaadh tariikhdu markay ahayd 20kii bisha wuxuuna ahaa shirk ay ka soo qaybgaleen dhamaan bulshada qaybaheeda kala duwan iyo Gudoomiyaha Jahbada Wadaniga Xoreynta Ogadeenia Adm. Maxamed Cumar Cismaan oo shirkan si toosa khadka teleefoonka uga soo qayb galay. Waxaa shirka gudoominayay gudomiyaha jaliyada Riyaadh halgame Maxamed Axmad oo markuu shirka furay ka dib ku soo dhaweeyay Sh. Xasan Cabdi C/laahi oo arimaha diinta u qaabilsan jaaliyadda isagoo ku foray aayadaha quraanka kariimka iyo wacdi diini ah oo dadkii meesha isugu yimid uu ugu sheegay inay Ilaahay ka cabsadaan una towbad keenaan oy ilaaliyaan midnimada iyo isku xidhnaanta. Wacdigii diiniga ahaa kadib ayaa waxaa lagu soo dhaweeyay wakiilka Bariga dhexe oo xogwaran fiican siiyay dadweynihii goobta fadhiyay.
Ka dib waxaa khadka tel. loo furay gudoomiyaha JWXO oo qudbad dheer oo meela badan taabanaysa u jeediyay bulshadii kasoo qayb gashay shirka. Wuxuu gudoomiyaha uga xogwaramay jaaliyadda doorka ay jaaliyadaha ka qaadanayaan halganka gobanimadoon isagoo ugu dambayntii uga mahadnaqay jaaliyadda Sacuudiga oo door fiican ka qaadata halganka iyo taageerada walaalahooda ku dhibaataysan gumaysiga gudaha.
Q udbadaa qiimaha leh kadib waxaa gudoomiyaha la waydiiyay su’aal muhiiim ah isagoo ugu jawaabay gudoomiyaha si faraxad galisay bulshadii dhagaysanaysay. Ugu dambayntii wuxuu gudoomiyaha jabhadda kula dardaarmay inay u sabraan halganka una dulqaataan culayska halganka.
sultan gaayac says:
aad iyo aad ayaad u mahadsantahiin dhamaan jaaliyaadka reer ogadenya khaasatan kuwa reer galbeedka iyo dhamaan kuwa afrikada bari iyo dabcan anaga oo ku sugan wadamada carabta waxaan idi leeyahay
guuuuuulaysta guulyasta guulaysta waad gaari doontaan guusha kama danbaysta ah
waxaana idinkula dardaarmaynaa ha daalina waad gaari doontaan waxaad raadinaysaane guuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuy iyo gobanimo